Na kaadị kọntaktị Bankia ọ dịghịzị mkpa itinye kaadi n'ime igwe ndọrọ ego iji rụọ ọrụ | ECommerce ozi ọma
Bankia amalitela oru ohuru maka ya kọntaktị na-enweghị kaadị (kọntaktị) nke na-enye ohere ịdọrọ na netwọkụ ATM gị na-enweghị itinye kaadi n'ime ngwaọrụ ahụ. Na Bankia kọntaktị na-enweghị kọntaktị O zuru ezu iji mee ka kaadị na-enweghị kọntaktị nso na kaadị njirimara nke onye na-ahụ maka ego (ihe nkwụnye ọkara okirikiri n'akụkụ keyboard) iji nwee ike ịrụ ọrụ. N'ihi ọrụ a, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ na nchekwa na ATMs Bankia.
Na mgbakwunye, etinyere mmelite a na Bankia obere akpa, ọrụ nke ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya malitere nke na-enye gị ohere ịgbanwe ekwentị mkpanaaka gị na kaadị kọntaktị.
Usoro iji rụọ ọrụ na ATM Bankia nwere kaadị enweghị kọntaktị dị mfe: ozugbo igwe ndọrọ ego achọpụtala kaadị ahụ, onye ọrụ nwere ike tinye PIN ha, chekwaa kaadị ahụ wee malite ịrụ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ, na-enweghị idebe ya na ngwaọrụ ahụ.
Ọrụ ọhụrụ a na-enye gị ohere imeri mfe y ngwangwa N'ime usoro ịdọrọ ego site na ATM Na mgbakwunye, nchekwa na-abawanye mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ n'ihi na kaadị ahụ na-anọgide na-abụ nke onye na-ejide ya, a na-ezere ịhapụ ya echefuola na ATM ma ọ gaghị ekwe omume na ọnụ ga-ejigide kaadị ahụ.
Ugbu a, Bankia nwere ihe karịrị igwe ndọrọ ego 600 nke na-ekwe ka ọrụ a. A ga-eji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe ihe ndị ọzọ ruo mgbe akụ ATM niile nke ụlọ ọrụ ahụ gwụchara.
Bankia enweela kaadị karịrị kọntaktị 890.000 nyere nke nwere ike irite uru na arụmọrụ ọhụrụ a. Tụkwasị na nke a, a ga-ejikwa kaadị ndị a zụta ihe na ihe karịrị 400.000 POS (isi nke ọnụ ahịa ire ere) ma ọ bụ data data emegharị ka akwụ ụgwọ na-enweghị ịkpọtụrụ na Spain.
Newzọ ọhụrụ iji wepụ ego na igwe ndọrọ ego site na iji teknụzụ adịghị Ọ dịkwa maka nke a Bankia obere akpa. Ọrụ a malitere n'oge na-adịbeghị anya site na ụlọ ọrụ ahụ, ma jikọta kaadi enweghị kọntaktị na ngwa mkpanaka. Onye na-ejide Bankia Wallet nwere ike ịzụta ihe na ekwentị mkpanaaka na-ejighi kaadị ndị ọzọ ma ọ bụ ego, yana naanị site na ime ka ekwentị ahụ dị nso na ọnụahịa nke ire ere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Banyere kaadị na-enweghị kọntaktị ọ na-adịkwaghị mkpa itinye kaadi n'ime igwe ndọrọ ego iji rụọ ọrụ
Ebumnuche nke Banco Sabadell ga-etinye na oku nke abụọ nke usoro BStartup 10 ahọrọla